Spain: Maxaa ka hirgali doona Aftida Catalonia? – Kasmo Newspaper
Spain: Maxaa ka hirgali doona Aftida Catalonia?
Updated - September 30, 2017 2:04 pm GMT
London (Kasmo), Dowlad Goboleedka Catalonia “Generalitat de Catalunya” ee dalka Spain waxay ku dhawaaqday in maalinta barri, 1da Oktoobar 2017 la qaban doono Aftidii madaxbannaanida Catalonia.
Barlamaanka Gobolkaas ayaa horey ugu codeeyay sharciyada Aftida iyo marxaladda kalaguurka, kuwaas oo jidaynaya in ay Madrid ka go’aan. Sidaasna waxaa isku raacsan isbahaysiga Xisbiyada “Partit Democratic de Catalunya” (Midig Dhexe), “Esquerra Republicana de Catalunya” (Bidix Dhexe) iyo CUP (Candidatura d’Unitat Popular) oo Bidixda fog ah.
Xukuumadda Dhexe ee R/Wasaare Rajoy, oo muddo dheer dooratay dariiqa qaanuunka, waxay markii hore la tiigsatay Maxkamadda Dasuuriga, taas oo laashay shuruucdii Barlamaanka catalonia ansixiyay.
Markii dambana, 20kii Septembar, waxay “Guardia Civil”, oo ah Boliis u tababaran sida Militariga, u dirtay xafiisyadii lagu diyaarinayay Aftida: waxaa xabsiga la dhigay 14 qof, 10 malyuun oo dokumentigii Aftida ahna waa lala wareegay.
Afti hore oo 9kii Nofember 2014 dhicisowday, R/Wasaare Rajioy, sidaas oo kale ayuu ula dhaqmay: Madaxweynihii Catalonia ee xilligaas, Artur Mas, waxaa shaqada laga fariisiyay 2 sano, waxaana la ganaaxay 5 malyuun oo Euro.
Maalmihii la soo dhaafay, boqollaal dad ah ayaa Barcelona ka dhigayay dibadbaxyo looga soo horjeedo Boliiska oo is dabajoog ah. Xukuumadda Dhexe waxay goosatay xoojinta Boliska iyo Guardia Civil iyada oo gurmadyo laga keenay Gobollada kale, si ay u buuxiyaan kaalinta “Mossos d’Esquqdra” oo ah Boliiska madaxabannan ee Catalonia.
Dokumenti ka soo baxay Wakiilka Sare ee Qarammada Midoobay u qaabilsan Xuquuqda Aadanaha, waxaa loogu digay Madrid: falalka Boliisku in ay xadgudub ku noqon karaan xuquuqda qofka, si ka madaxbannaan sharciyadda Aftida.
Guud ahaan dalka, Xisbiyo siyaasadeed iyo Ururro kale ayaa ka soo horjeeda madaxbannaanida Catalonia. Boqorka Spain, Filipe VI wuxuu dhaleecayn dusha uga tuuray “cidda doonaysa in ay Spain kala qaybiso”, wuxuuna hoosta ka xarriiqay qiimaha midnimada dalku leedahay.
Sidoo kale waxaa ka soo horjeeda Maraykanka iyo waliba Midowga Yurub oo isaga oo walaac ka qaba ugu hanjabay Catalonia in ay dibadda ka ahaan doonto, haddii ay ka go’do Spain, kuna khasbanaan doonta in ay dib u soo codsato xubinnimada Midowga Yurub.
Catalonia iyo Barlamaankeedu waxay ku adkaysanayaan in Aftida la qaadi doono, Xukuumadda Dhexe waxay ciidammada nabadgalyada ku amartay in la is hor taago iyo in la hirgaliyo xukunka Maxkamadda Sare, midda Dastuuriga iyo Maxkamadda Sare ee Caddaaladda Catalonia.